महासचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
० हालै गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई फोरमले कुन रूपमा लिएको छ ?
— विगतका दिनमा राजनीतिक दलहरू टुट्दै फुट्दै आएका छन्, जसबाट जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको थियो । संविधान निर्माणपछि वाम गठबन्धन लगायत अन्य दलहरू पनि एकता गर्ने प्रयास गर्दैछन् । जसमध्ये माओवादी र एमाले सर्वप्रथम एक भए । विभाजित भएकाहरू एक ठाउँमा हुनु भनेको सकारात्मक पक्ष नै हो । लोकतान्त्रिक शक्ति मजबुत हुनुपर्ने दृष्टिकोणले हेर्दा लोकतान्त्रिक पक्षधरहरूको हकमा यो एकताका साथ अगाडि बढेको छ । त्यसकारण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको लागि यो चूनौतिको विषय भएको छ । मधेशवादी दलहरूका लागि पनि एकताको विषय दबाबको विषय बनेको छ । मधेशवादी दलहरू र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले पनि एक आपसमा एकता गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।
० वामपन्थी दलहरूबीच एकीकरण भइरहँदा मधेशवादी दलहरूलाई पनि एकीकरणको दबाब परेको हो ?
— दबाब त आएकै छ तर आज मात्र होइन । मधेशवादी दलहरू पनि अब एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ तर यो चूनौतिको विषय पनि हो । यसलाई सामना गर्नका लागि विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई औँल्याएर त्यसको समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग मधेशवादी दल मिल्नुपर्छ ।
० अहिलेकोे सरकारलाई तपार्ईंहरूले विश्वासको मत दिनुभयो तर यो सरकारले माग सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरामा कति विश्वास छ ?
— सरकारले एक आपसमा सहयोग गरेको आधारमा विश्वासको मत दिएका हौँ । वाम दलले पनि प्रदेश २ मा हामीलाई विश्वासको मत दिएर सहयोग गरेको हो । त्यो आधारमा पनि हामीले सरकारको पक्षमा विश्वासको मत दिएका हौँ । मुद्दाको सवालमा अहिले हाम्रा मागहरू यथावत् नै छ । संविधानलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्ने हाम्रो माग पुरा गराउनलाई हामी संघर्ष गरिरहेका छौं । सरकारसँग पटक–पटक छलफल गरिरहेका छौं । हामीलाई सरकारमा जानका लागि आग्रह गरिरहेको अवस्थामा हामी संविधान संशोधन गरेर मात्र सरकारमा जाने अडान भएको हुँदा संशोधनप्रति सरकार पनि सकारात्मक देखिएको छ ।
० वाम गठबन्धनको यो एकीकरण पश्चात् संशोधनसहितका अन्य माग पूरा हुने सम्भावना अझ बढेको छ कि टरेको छ ?
— सरकारमा जाने भन्ने हाम्रो माग होइन त्यो त सरकारको माग हो । त्यो आधारमा हामीले यो कुरा भनिरहेका छौँ । निश्चित रूपमा हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन नभएसम्म हामी सरकारमा जादैनौँ । हाम्रो चासोको विषय भनेको संविधान संशोधन हो, सरकारमा जाने होइन । उनीहरूले पनि संविधान संशोधन गर्छौं भनेर आश्वासन दिएका छन् । तर यसको विषयमा कुनै निष्कर्ष भएको छैन । संविधान संशोधनको टुङ्गो नलागेका कारण सरकारमा जाने÷नजाने भन्ने बारेमा केही भन्न सकिदैन ।
० संविधान संशोधनको लागि सत्ता पक्षसँग अहिले वार्ता भइरहेको छ ?
— औपचारिक रूपमा अहिले कुनै वार्ता भएको छैन ।
० प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सकिए लगत्तै चीन भ्रमणको तयारी हुँदैछ, यस्तो अवस्थामा सरकार पक्ष तपाईंहरूको मागप्रति गम्भीर छ जस्तो लाग्छ ?
— चुनाव सकिएपछि सरकार पक्षले भ्रमण गर्नु र भ्रमण गर्दैमा हाम्रा मुद्दाहरूप्रति संवेदनशील छैन भन्न मिल्दैन । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जानुभयो र भारतको प्रधानमन्त्रीले पनि नेपाल भ्रमण गर्नुभयो । भ्रमण हुँदैमा हाम्रा मागहरूप्रति सरकार गम्भीर छैन भन्ने सोचाई राख्नु गलत हो । छिमेकी देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नु सरकारको दायित्व हो । त्यसकारण भ्रमण हुनु राम्रो पक्ष हो । जहाँसम्म हाम्रो मागको सवाल छ, त्यो सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । यो मधेशको सवाल हो । यो विगतका मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाती आन्दोलन लगायतका उत्पीडित समुदायका हितका सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका सम्झौता राज्यले गरेको छ । यी सम्झौता र सहमतिमा भएका विषयलाई संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने काम सरकारको हो र सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयहरू समावेश गर्नुपर्छ । अब यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन हो भने सरकारको नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ तब मात्र सार्थक हुन्छ जब उत्पीडित समुदाय खासगरी मधेशी, आदिवासी, मुस्लिम, जनजाती, महिलाहरूको उत्थान हुन्छ । तसर्थ राज्यले यो मुद्दालाई हल गर्नुपर्छ, राजनीतिक समस्यालाई हल गर्नुपर्छ । राज्यले संविधान संशोधन गरेर उत्पीडित समुदायका समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
० विश्वासको मत नलिएसम्म तपाईंहरूसँग पटक–पटक छलफल हुन्थ्यो तर मत दिएपछि वार्ता हुनै छाड्यो । यसले त मुद्दाप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको भएन र ?
— पहिला त सरकारको नियत ठिक हुनुप¥यो । संविधानमा भएका त्रुटि, हामीसँग गरिएका सम्झौता, सरकारमा सहभागिताको विषय, संविधान संशोधनको विषय यो सरकारले गर्नुपर्छ ।
० अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधनप्रति सरकारको नियत कस्तो देख्नुहुन्छ ?
— नियत स्पष्ट नै छ । सरकारको नियतमा खोट भएकै कारण त विभिन्न किसिमका आन्दोलन भएको हो । अब जुन नारा सरकारले ल्याएको छ ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने त्यो त्यति बेला मात्र सम्भव छ जब विभेदको अन्त्य हुँदैन, राजनीतिक समस्याहरू समाधान हुँदैन, शान्ति र स्थिरता हुँदैन । त्यसकारण समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुनका लागि पहिले विभेदको अन्त्य गनुपर्छ । राज्यले नीति–निर्माण गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ तब मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुन सक्छ ।
० सरकारलाई तपाईंहरूको समर्थन कहिले कहिलेसम्म रहन्छ ?
— सरकार प्रतिको समर्थन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अवस्था छैन । सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनिरहेको छ । त्यसको लागि केही समय पर्खिनु नै पर्छ । यस विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर निणर्य गरिन्छ ।
० प्रदेश २ मा पनि वाम गठबन्धनको बहुमत रहेको छ, अब प्रदेश २ को सरकारमा वाम गठबन्धनलाई सहभागि गराउने सम्भावना छ ?
— यो विषयमा कुनै पनि कुरा भएको छैन । उहाँहरूले पनि यो विषयमा कुरा राख्नुभएको छैन भने हाम्रो तर्फबाट पनि कुरा भएको छैन । पहिले उहाँहरूले निःस्वार्थ समर्थन गर्नुभएको छ । प्रदेश २ मा फोरम र राजापा गठबन्धनको सरकारे छ र अहिलेसम्म निर्वाध रूपमा नै सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । कसैको तर्फबाट यस किसिमको माग भएको छैन ।
० प्रदेश २ सरकारमाथि केन्द्र सरकारको कस्तो व्यवहार देख्नुहुन्छ ?
— व्यवहारको मूल्यांकन गर्ने परिपक्क समय आएको छैन । अहिले भर्खरै मात्र सरकार सञ्चालनमा आएको छ । अबका दिनमा राजनीतिक गतिविधिहरू व्यवहारमा नआएसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन । केही समय सरकारका काम हेरौँ । त्यसपछि कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ ।
० प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणलाई केन्द्र सरकारले रोकेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
— यो भ्रमणलाई सरकारले के कारणले रोक्यो, त्यो प्रष्ट भएको छैन । तर सरकारले यो भ्रमण रोकेर गल्ती गरेको हो । अहिले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने समय हो । यो समयमा जानु उपयुक्त हुँदैन भनेर सरकारले कारण देखाई अस्वीकृत गरेको छ । मलाई के लाग्छ भने मुख्यमन्त्री भ्रमणमा गएको भए पनि यसमा कुनै असर पर्ने थिएन ।
० भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको समयमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दिएको अभिव्यक्तिबाट संसद लगायत केन्द्र सरकार पनि असन्तुष्ट छ, त्यसैको प्रतिशोध अहिले केन्द्र सरकारले लिएको त होइन ?
— मलाई के लाग्छ भने मधेशी जनताको आन्दोलनका समयमा प्रकट भएका भावना थियो, त्यही भावना मुुख्यमन्त्रीले राख्नुभएको हो । त्यो कुरालाई हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भनिरहेका छौँ । राज्यले मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिकै कारणले हो या पहिले देखिनै राज्यले अपनाउँदै आएको कूटनीतिकका कारण हो तर राज्यले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको समस्यालाई समाधान गरेर सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्छ तब मात्र देश समृद्धको बाटोतर्फ उन्मुख हुन्छ ।